Ukuqina Ishidi Acrylic
Sula Sheet Acrylic
Mirror Acrylic Ishidi
Frosted Ishidi Acrylic
Yenhlanzeko Acrylic Ishidi
Anti-glare Sheet Acrylic
Anti-Scratch Acrylic Ishidi
Anti-Static Sheet Acrylic
Ezingashi Ishidi Acrylic
Iyaphela Acrylic Ishidi
Marble Acrylic Ishidi
Iphethini Acrylic Ishidi
Pearl Acrylic Ishidi
Izinkuni Grain Acrylic Ishidi
Sula Tube Acrylic
Umbala Acrylic Tube
Elikhulu Tube Acrylic
Khanyisa Guide Acrylic Tube
Sula Rod Acrylic
Umbala Acrylic Rod
Khanyisa Guide Acrylic Rod
Iphethini Acrylic Rod
inkatho ishidi workshop
extrusion ishidi workshop
Ifenisha & Bathroom
Ukukhanyisa & Ukuhlobisa
Nezimpawu & Khombisa
Inkampani usanda kwethula lento ehamba phambili othomathikhi umugqa ekubunjweni kanye extrusion acrylic akhiqizwa emhlabeni wonke kanye nayo iBritish "British Pilkington Glass" ingilazi isikhunta. Kingsign inomlando iminyaka engu-15 emkhakheni acrylic, futhi iye esekelwe ephezulu ukukhiqizwa ekubunjweni ibhodi futhi ifakwe eziphambili Taiwan ukukhiqizwa umugqa. It usebenzisa monomer MMA olunikezwa izinkampani omhlaba bodumo futhi polymerized ngu ephezulu lokushisa asakazwe inqubo. Nge idumela elihle, ke uyawuthanda idumela eliphezulu embonini. Le nkampani iye ukuphishekela emisha kanye ngcono okuqhubekayo.
Ngo-2016, Kingsign Acrylic wethula ezine amazwe ephezulu ukukhiqizwa extrusion ibhodi imigqa (ezimbili eziphambili Italian imigqa ukukhiqizwa futhi ezimbili engenisiwe Toshiba zokukhiqiza imigqa), futhi ngokuzimela athuthukiswe futhi ekhiqizwa yasekhaya ephezulu extrusion amapuleti. Ukukhiqizwa extrusion amapuleti ubamukela PMMA zithutha olunikezwa izinkampani omhlaba bodumo. Imikhiqizo zisekelwe funa emakethe eliphezulu acrylic ukukhanya Umhlahlandlela amapuleti at zendawo phesheya. Nge Idumela elihle eduze uhlelo inkonzo emakethe ukumaketha, inkampani uthola idumela eliphezulu emkhakheni acrylic ukukhanya Umhlahlandlela amapuleti. Imikhiqizo yethu imakethe ezinhle futhi babe sezingeni leliphakeme brand idumela, futhi abathandayo amakhasimende zendawo phesheya bese zithunyelwa eYurophu, eMelika, eNingizimu-mpumalanga Asia nakwezinye izingxenye zomhlaba. Ngesisekelo izinga esitebeleni kanye nokusebenza high, Kingsign Acrylic ishidi balujabulela emakethe enhle iminyaka eminingi.
Kingsign Acrylic iyinkampani professional onguchwepheshe ukwakhiwa nokudayiswa acrylic amashidi, amashubhu nama-rod. Imboni yasuka Shanghai Anting Industrial Park eSifundazweni Jiangsu. Imboni ihlanganisa indawo ka 60,000 square metres futhi ine ukukhiqizwa umthamo minyaka yonke ongaba amathani 20,000. Sesisungule izinkampani e Hong Kong, Shanghai, ne-United States, futhi Shanghai amahhovisi ophethe yokuthengisa global nokumaketha;
Njengenjwayelo, Kingsign acrylic uzoqhubeka kuze kube izimiso ibhizinisi lenkampani "Quality Iza Okokuqala, Amakhasimende yiwona eyayibaluleke", futhi sizibophezele ukubambisana ngobuqotho, akhiqize babegcina, ngcono njalo futhi ukumvuthela emizileni entsha njalo.
kwelokuvukela umbuso wase
Black Acrylic Rod, Sula Round Acrylic Rod, Acrylic Guide Ngenduku , Elikhulu Tube Acrylic, Solid Sula Rod Acrylic, Plastic Round Tube ,